Arimaha bulshada Archives - Page 3 of 25 -
August 22, 2019 F.G 0
Waxaa la filayaa in doorashada madaxaweynaha Jubbaland ay bilaabto dhawaan iyada oo hoowlka doorashada ay xaadir ku yihiin musharixiinta iyo xildhibaanad.
“In Itoobiya loo adeegsado Jubaland waa qiyaano qaran oo uu sameeyey Farmaajo” Waxaa sidaas yiri
August 20, 2019 F.G 0
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi ayaa war kasoo saaray xiisadda ka jirta Kismaayo ee ka dhalatay isku dayga ay ciidamada Itoobiya ku doonayaan inay ku degaan Fiqi ayaa qoral uu soo dhigay bartiisa facebook ku sheegay in ciidamada Itoobiya ee doorashada loo Jubaland loo adeegsanayo uu ka dambeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo uu ku qeexay qiyaanno qaran. Hoos ka aqriso qoraalka Fiqi oo dhameystiran Ciidamada Itoobiya ee arrimo hoosaadka Doorashooyinka Kismaayo loo adeegsanayo oo hadba weji cusub la soo baxaya waa khiyaano Qaran oo xafiiska madaxweyne Farmaajo uu ku dhacayo. Kanaaladii kol hore la sheegay in la soo xiray sow uma eka kuwo qaranimadii iyo madaxbanaanidii Soomaaliya baabi’inteeda lagu soo bedeshay. Isku day kale oo Qiyaano Qaran ah ayaa shaley galab lagu fashiliyey Kismaayo, ka dib markii ciidamo Kumaandoosta Itoobiya ka tirsan oo la soo kiraystey ay si tahriibis ah isugu dayeen In lagu soo gelsho Kismaayo kaasoo ugu danbayn guuldarreystey. Doorashooyinka dawlad goboleedyadu waxey midba midda ka danbaysa daaha ka sii rogaysaa sida dalka Soomaaliya iyo taladiisii loo hoos geeyey Dawladda Itoobiya, laakin [Sii aqri]
Xildhibaanno Ka Tirsan Baarlamaanka Federalka Oo Taageeray Hannaanka Doorasho ee Jubbaland
August 19, 2019 F.G 0
Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka federaalka ee ku sugan magaalada Kismaayo, xarunta KMG ah ee Jubbaland ayaa qoraal ka soo saaray sida xornimada leh ay u dhacday doorashada ay goobjooga ka ahaayeen ee guddoonka baarlamaanka 2aad ee Jubbaland. Xildhibaannada ayaa intaasi ku daray in dowladda federaalka ah ay ku tumaneyso sharciyada dalka, waxaa kale oo ay ka hadleen in dowladaha dariska aan laga ogolaan doonin faragelinta arrimaha dalka. Xildhibaanadaan labada Aqal ee BF ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay muhiim tahay in cid waliba ay ixtiraamto dastuurka dalka u yaala. Halkaan ka Akhriso, War Saxaafadeedka:
XOG:Safiiro Magacaaban aan La Shaqo Gelin Iyo Safiiro Si Hoose Looga Magacaabo Xafiiska Madaxweyne Farmaajo
August 16, 2019 F.G 0
Tan Iyo Markii ay soo Ansixiyeen Gollaha Wasiirada Somaliya Danjirayaal Cusub Oo Gaarayay Shan ayaan Wali La Shaqa Gelin Hase ahaatee Waxaa Muuqata in ay Jiraan Wax is daba marin Sida Muuqata ayadoo ay Jiraan in Madaxweeyne Maxamed Farmaajo uu Safiiro Ka Magacaabayo Xafiiskiisa ayadoo aan la soo Marsiin Shirka Gollaha Wasiirada . Cadeeyn Sax: Muqdisho, Khamiis, 23 May 2019 —Golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu Shir Guudoominayay R/Wasaare Xasan Cali Kheeyre ayaa darajada safiirnimo loogu dallacsiiyay, Hase Ahaatee Waa Magac u yaal 1)Muxidiin Maxamed Kaalmooy, 2) Xasan Daahir Dhibil, 3)Xasan Xundubey Jimcaale, 4)Maxamed Isxaaq Ibraahim 5) Maxamed Cali Mire. Magacaabistii Gollaha Wassirada Ka Dib: 29/5/19; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto ugu magacaabay Mudane Cabdixakiim Xasan Ashkar in uu noqdo Danjiraha dalkeenna u qaabilsan dalka aan walaalaha nahay ee Boqortooyada Sucuudiga. Waxana ay Isku Beel Yihiin Madaxweeyne Farmaajo Dhinaca Kale Waxaa Jiray In Safiir Loo Magacaabay Madaxweeyne Ku Xigeenkii Labaad ee Puntland C/xakiin C/llaahi Camey Waxaana Lagu Bedelay Safiirkii Hore u Joogay Somaliya dalka Itoobiya Cali Shariif Axmed oo isna loo wareejiyey [Sii aqri]
Maamulka Warbaahinta Ceelbarafonline.com Oo shacabka Soomaaliyed ugu hambalyeynaya Ciidul-adxaa
August 11, 2019 F.G 0
Maamulka iyo Shaqaalaha Ceelbarafonline.com waxay hambalyo u dirayaan guud ahaan ummaddaha islaamka meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed taasoo ku aadan Munaasabada Ciidul adxaa. Waxaana ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed iney is cafiyaan farxada munaasabada ciida awgeed ayna isku naxariistaan si ay u helaan naxariista ALLE. Waxaan hambalyo ku aadan Munaasabada Ciidul-adxaa u dirayaan dhamaan ummada islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo muslimiinta gudanaya waajibaadka xajka oo ka mid ah shanta tiir ee Islaamka Waxaana u rajeeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shucuubta islaamka meel kasta oo ay joogaan iney sanadkan kiisa kale ku gaaraan, guul horumar, nabad iyo Barwaaqo Iyo Xasilooni.
Maqaal: Maxaa Ku Qasbey Inuu Celiyo Dhalashada Mareykanka?
August 1, 2019 F.G 0
Madaxweynaha JF ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta waxaa uu dib u celiyey dhalashada Mareykanka, halkaasi uu ku waayey xuquuqdii muwaadinnimada Mareykanka. Inkasta oo ay soo daahday waa tallaabo ay dad badan bogaadiyeen, oo horayna u ahaa dalabka shacabka Soomaaliyeed. Mudane Farmaajo waxaa arrinkan horay ugu ogolaanayey dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Qof leh jinsiyadda Soomaaliyeed lagama qaadi karo jinsiyadda Soomaaliyeed, xataa hadduu qaato jinsiyad dal kale, laakin hadda waxaa socdo qorshe dastuurkan qabyada ah ee dib u eegista ku socoto lagu daro in Soomaaliya aanu madaxweyne ka noqon karin qof 2 Baasaboor leh. In dastuurka qabyo qoraalka ah lagu daro in Soomaaliya aanu madaxweyne ka noqon karin qof labo Baasaboor leh ma aha wax cajiib ah, oo waxaa uu qodobkaas isaga oo far waaweyn ah ku jiray dastuurkii 1960-kii, qodobka 71aad, dastuurkii 1979-kii, Qod. 81aad iyo Dastuurkii 1990-kiiqodobkiisa 78aad. Sababaha Madaxweyne Farmaajo Ku Qasbi Kara Inuu Celiyo Dhalashada Mareykanka: 1. In uu arkay dastuurka dib-u-eegista ku socoto, oo laga reebay qodobkii madaxweynaha u ogolaaney 2 Baasaboor, sidaa darteedna ansixintiisa uu si qasab ah ku weydoono [Sii aqri]
AKHRISO:Luqmaan Maxamed Nuur Ardaygii Sanadka 2018/2019
July 29, 2019 F.G 0
(Md. Luqmaan Maxamed Nuur Arday Waxaa Munaasabad Qaran Loo Iyo Dhiiragelin Loo Sameeyay ardaygii Soomaaliyeed ee kaalinta koowaad u galay imtixaanka qaranka ee shahaadada dugsiga sare 2018/2019. Taariikh Nololeedkiisa Luqmaan maxamed Nuur Waxa uu ku dhashay Degmada Ceelbaraf Oo Ka Tirsan G/Sh/dhexe Waxbarashadiisa Waxa uu ku soo bartay Qur’aanka 114 Xifdintiisa Markii uu Ka Baxay Dugsi Quraanka Waxa uu Bilaabay In uu Barto Cilmiga Noocyadiisa Kala Duwan Dugsi Hose Iyo Dhexe Waxa uu ku soo qaatay Degmada Ceelbaraf Kadibna Waxa uu u Soo Wareegay Magaalada Muqdisho Waxana uu Waxbarashadiisa ka Sii Bilaabay Iskuulka Al-Fajri . Munaasabad qaran oo heer sare loo soo agaasimay ayna kana soo qaybgaleen indheer garadka bulshada bahda waxbarashaduna ugu badnayd ayaa lagu qabtay Hotelka Beach View ee magaalada Muqdisho, munaasabadda ayaa lagu xusayey dedaalka ardaygii ka soo banbaxay ku dhawaad soddonkii kun ee arday ee u fariisatay intixaanka qaranka ee shahaadada dugsiga sare. Jawiga oo ahaa mid qiiro lahaa waxaa ka hadlay dad badan oo soo jeediyey hadallo isugu jiray ammaan, duco iyo dardaaran loona muujinayey ardayga Luqmaan Maxames Nuur, waalidkiis, [Sii aqri]
AKHRISO:Fashilkii R/Wasaare Xasan Kheeyre Iyo Balanqaadyadiisii Oo Ku Soo Koobmay IGU SAWIR
July 6, 2019 F.G 0
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la magacaabay 23-kii bishii Feb. 2017, waxa uuna Kalsoonida Baarlamaanka uu helay 1-dii bishii Marso 2017. Khubadii ugu horreysay ee uu jeediyo waxay aheyd midi uu ku soo bandhigay Barnaamijkiisa siyaasadeed ee dalka isagoo hortaagan Golaha Shacabka. Kheyre ayaa sameeyay ballan weyn waxaana ugu weynaa 8 qodob oo kale. Gurmadkii qaran ee Abaaraha Soomaaliya sanadkii 2017-kii Wax ka qabashada arimaha Amniga Dhisidda Ciidan qaran iyo xasilinta dalka La dagaalanka Musuq maasuq iyo hagaajinta mamulka iyo maareynta Hirgelinta cadaaladda iyo dhismaha Garsoorka Dhameestirka dasuurka iyo federaaleynta dalka iyo hergelinta azxaab siyaasadeed Doorashooyin dalka ka dhaca heer federaal, heer gobal iyo heer degmo Dib u heshiisin, mideynta dalka iyo wadashaqeynta dalka Warbixintaan waxaan ku eegi doonnaa waxyaabihii uga qabsoomay 8-dii qodob ee uu ballan qaaday 2 sano ka hor Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo sanadkii 3aad bilooyin ka qaatay. La dagaalanka musuq maasuq iyo hagaajinta mamulka iyo maareynta: Kheyre ayaa sidoo kale dagaal weyn la galay Musuq Maasuq, iyadoo loo xiray Wasiiro, Saraakiil Ciidan, Agaasimayaal iyo mas’uuliyiin kale oo [Sii aqri]
Soomaaliya Ma Waxay ay ka mid noqotay Itoobiya?
May 26, 2019 F.G 0
Dadka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn uga falceliyay sawir lagu daabacay bogga internet-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya, kaasoo muujinaya khariidadda Afrika, iyadoo Soomaaliya lagu daray Itoobiya. Sawirka muranka dhaliyay, oo ilaa iminka aysan ka hadlin dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa durba laga saaray bogga wasaaradda, kadib markii qeylo dhaan la xiriirta ay cirka isku shareertay. Waxaase xusid mudan in khariidadda Soomaaliya ee Itoobiya la raaciyay laga reebay dhinaca Waqooyi, halkaasoo ay ka arrimiso jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Arrintan ayaa lagu tilmaamay mid meel ka dhac ku ah jiritaanka Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana dadka ka fal celiyay ay sheegeen in Itoobiya ay dooneyso wax ay ugu yeereen “dhul ballaarsi”.Arrintan ayaa lagu tilmaamay mid meel ka dhac ku ah jiritaanka Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana dadka ka fal celiyay ay sheegeen in Itoobiya ay dooneyso wax ay ugu yeereen “dhul ballaarsi”. Dhanka kale waxaa khariidadda lasoo sawiray aan lagu muujinin Suudaanta Koonfureed, iyadoo lagu daray dalweynaha Suudaan. Hase ahaatee, lama oga in khariidaddan la sameeyay ka hor intii [Sii aqri]
AKHRISO:Dowlada Keenya Maxaa Kuleeylka Ka Keenay?
May 21, 2019 F.G 0
Xiisad dibulaamiyadeed ayaa ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Kenya, ayadoo labadan dal uu ka dhexeeyo muran dhanka badda ah, taas oo keentay in dacwaddoodu ay gaarto Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ah ee ICJ. Muranka dhanka badda ah ee labada dal ayaa horseeday xiisad diblumaasiyadeed oo ka dhex qaraxday, Kenya ayaana dhawaan qaadday tallaabooyin ay ka mid tahay in ay u yeeratay Safiirkeedii u joogay Soomaaliya halka safiirka Soomaaliya ay ku wargalisay in uu dalka ka baxo. Sidoo kale waxay hakisay duulimaadyaddii tooska ahaa ee diyaaradaha rakaabka ah ee u kala gooshi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, sheegtayna in ay u weecisay magaalada Wajeer si baadhitaanno loogu sameeyo. Kenya ayaa tallaabadan ku sheegtay mid ay uga golleedahay in ay ammaankeeda ku sugto. Si kastaba ahaatee, waxaa la iswaydiinayaa waxa Kenya ku kallifay in ay qaaddo tallaabooyinkan ka dhanka ah Soomaaliya, ayadoo dhanka Soomaaliyana uusan jirin wax falcelin ah oo arrimahaas ku saabsan? Dadka wax falanqeeya ayaa tallaabooyinkan ay Kenya qaadday u Sababeeynayo dhowr arrimood oo ay kamid yihiin: Sharciga Batroolka Soomaaliya Baarlamaanka dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya [Sii aqri]